IIPOLYPROPYLENE VS IRAWS RUGS (IINKONZO KUNYE NENGXAKI) - UKUHOMBISA
Eyona Ukuhombisa Iipolypropylene vs iRaws Rugs (Iinkonzo kunye neNgxaki)
Nasi isikhokelo sethu sokuthelekisa iipolypropylene vs iiragi zoboya kubandakanya ubuchule kunye neengozi, iindleko, ukuhlala ixesha elide, ukhuseleko kunye neengcebiso zokucoca. Ukukhetha owona mbhoxo ubalaseleyo ekhayeni lakho kunokuba nzima kakhulu njengoko kukho ubutyebi bezinto onokukhetha kuzo. Ngapha koko, ngenkqubela phambili kubuchule noomatshini namhlanje, ukwahlula phakathi kwamalaphu endalo kunye nokwenziwa kwaba nzima nangakumbi njengoko phantse bejongeka kwaye ngamanye amaxesha beziva ngokufanayo.
Oku kulandelayo kukuthelekisa phakathi kwezona zinto zimbini zithandwayo kwiimarike ezibonakala zifana neplypropylene kunye neerugs zerug.
Yintoni iipolypropylene rugs?
Iipolypropylene iiragi zenziwe ngokusisiseko kwimicu eyenziweyo, ngakumbi ipolymer ye-thermoplastic. Umatshini owenziwe ngumatshini ukwabizwa ngokuba yi-polypropene okanye oqhelekileyo ubizwa ngokuba yi-olefin.
Uphawu olwahlukileyo lwePolypropylene okanye iiragi zeOlefin kukuba ijongeka njengoboya kwaye ihlala yenziwe ngezitayile zeBerber ezinamakhonkco ezinokuthi ziqale ukusuka kwi-matte ukuya kwi-gloss.
Iipolypropylene iirugs zibiza ixabiso elingaphantsi kweerugs ezenziwe kakhulu kwaye zihlala iminyaka emi-3 ukuya kwemi-5. Ziyasebenza kusetyenziso lwangaphandle kunye namagumbi angaphantsi okanye ezinye iindawo ezinemisebenzi ephantsi yezithuthi. Iimpawu zepremiyamu zinokumelana nokugcwala okuphakathi kwaye zize zivakale kwaye zithambe.
Iirugs zoboya ziirugs ezenziwe ngesandla ezenziwe ngobude obufutshane boboya obuvela kwizinwele ezithambileyo okanye ezijijekileyo zoboya begusha, ibhokhwe, okanye nasiphi na isilwanyana esifanayo. Iintsinga zendalo zihlala zilukiwe ngesandla ezenza ukuba zomelele kakhulu ezinokuhlala kangangeminyaka engama-50 okanye nangaphezulu.
Iirugs ezenziwe ngoboya ziyahluka ngokomelela kwazo kunye nokwenza okuxineneyo okuza ngekhrimu, mhlophe, sisilivere, kwaye kumdaka kwimeko yabo yendalo. Njengeyiloni, uboya bunokudaywa ukuze ufumane imibala kunye neepateni. Inylon noboya kuphela ngamalaphu amabini anokudaywa.
Imbonakalo iyonke ye-100% yemigca yoboya bendalo inembonakalo ye-matte kwaye ijongeka ngathi intofontofo kwaye ithambile ukuyichukumisa. Iibhola zoboya zinokuqina okuphezulu, ziyawagxotha amanzi, kwaye azimelani nomlilo, zenza ityali yendalo ilungele indawo ezihamba abantu abaninzi.
Ngoku siza kujonga i-polypropylene vs i-wool rugs pros kunye ne-cons ngokuqala ngoboya.
Ubuchule boBhoxo boBobo kunye neNgxaki yazo
Izipho zeminyaka eli-13 zomtshato
Iyahlala kwaye ihlala ixesha elide - Kukho izizathu zokuba kutheni iiragi zekhaphethi kunye nekhaphethi ziziqwenga zelifa eliyindlalifa. Iibhola zoboya zinokuhlala iminyaka engama-50 nangaphezulu kwaye zigcinwe ngcono. Oku kuthetha ukuba abayi kuphazamiseka ngokuhamba kweenyawo okanye xa behamba kunye nefenitshala enzima.
Umgangatho womoya ongaphakathi Iiragi kunye neekhaphethi ezenziwe ngoboya zingqinwe ngokwenzululwazi ukuba ziphucula umgangatho womoya ongaphakathi ngokufunxa izinto ezingcolisayo kunye nee-VOCs okanye iikhompawundi eziguqukayo emoyeni. Ukungathathi cala kwezi zingcolisi kunokuqhubeka nokufikelela kwiminyaka engama-30 yenkonzo yobomi beerug.
Ayibonisi ukungcola ngokulula -Iintsinga zokubambisa umhlaba zinomaleko okhuselayo apho ukungcola kuhlala ngaphezulu ukuze kube lula ukucocwa.
Ngapha koko, uboya abuyi kubonisa ngokungafaniyo neminye imicu ngenxa yokubonakala kwayo ngokungafaniyo, ngokungafaniyo nemicu eyenziweyo enemicu engafihliyo enokukhanyisa ukukhanya. Ukukhanya okusasazekayo kwenza ukuba iindawo ezingcolileyo zibonakale zingacacanga.
Amanzi agxothayo kunye nokufunxa amanzi -Njengokuba umphandle weerabha zewulu uthintela amanzi ukuba angangeni ngaphakathi kwimicu, iinxalenye zangaphakathi zifunxa umphunga wamanzi ongezelelweyo.
Ukuma okungaphantsi kuthetha ukungcola okuncinci - Amandla ombhoxo woboya wokugcina ukufuma anciphisa ukuyilwa kombane ongashukumiyo. Ke, amandla ombuso asezantsi athetha ukuba ngekhe athathe ubumdaka obuninzi kwiintsinga zawo.
Ukumelana namabala amaninzi -Ukutyabeka kwendalo kwelaphu loboya kwenza ukuba kube lula ukuxhathisa amabala asekwe emanzini.
Ezinokuboliswa ziintsholongwane -Ngaphandle kwexesha labo elide, iiragi zoboya zinokuboliswa ziintsholongwane, zisenza imveliso ehambelana nokusingqongileyo.
Uboya kukutya kwezinambuzane Imibungu yebhungane kunye namanundu zezona zinambuzane zixhaphakileyo ezithanda ukutya uboya kwaye zinokuwonakalisa kakhulu umbhoxo woboya bakho ngephanyazo.
Ukuthintela ukosuleleka zizinambuzane, hlamba irabha yakho rhoqo kwaye uqiniseke ukuba ushenxisa ifanitshala ehleli kwiraga yakho amaxesha ngamaxesha. Unokufaka intsholongwane yokubulala izilwanyana zasekhaya kwibhola yakho yoboya.
I-alkaline ingonakalisa umbhoxo wakho -Ngokungafaniyo neepolypropylene iiragi ezingenakho ukubala, amabala asekwe ngeoyile ngoboya kunokuba nzima ukususa. Ke, xa ususa amabala, qiniseka ukuba awusebenzisi iisepha ezisekwe kwialkali njengoko zinokonakalisa iintsinga kwirug yakho yoboya.
Ixabiso eliphantsi kuneerugs zokwenziwa - Iibhola zoboya ezisemgangathweni zinokuxabisa ngokuphindwe kabini kuneerugs zokwenziwa.
I-Polypropylene Pros kunye ne-Cons
Jonga lo mmandla weplypropylene wanamhlanje Amazon [ikhonkco elixhasiweyo]
Ukunganyangeki kwebala -I-Olefin okanye i-polypropylene rugs ayinakwenzeka ukuba ibala njengoko imicu ingafaki amabala. Oku kuyenza ukuba ibe lukhetho olusebenzayo kumakhaya anabantwana okanye izilwanyana.
Umbala okhawulezayo wombala -Uxhamlo lweerugin zerugs ngaphezulu kweminye imicu yombhoxo kukuba imibala yabo edayiweyo ayizukuphela naphantsi kweemeko zemozulu ezibi kakhulu. Oku kuxhathisa ukubuna kwenza ukuba kulungele ukusetyenziswa ngaphandle.
Ukumelana nokufuma -Iintsinga zokwenziwa zomile ngokukhawuleza ukuthintela ukukhula kwesikhunta kunye nokungcola, ukuyenza ibe lukhetho olukhulu kwindawo yokuhlambela kunye nekhitshi.
Elula -Ibhola yokuxinana esezantsi iyenza ukuba ibe lukhetho olusebenzayo lokuhambisa rhoqo.
Ukucoca ngokulula -Ukugcina ikhaphethi engenabala ngaphandle kweerugs kulula ukuba ungakhathazeki ngokusebenzisa iiarhente zokucoca ezinamandla. Amabala kunye nokucoca rhoqo akuyi kususa umbala wawo.
Ifikeleleka -Kunye neendleko eziphantsi zokuvelisa kunye nolondolozo olulula, yenza ukhetho olunengqiqo ukuba ufuna umbhoxo olungele uhlahlo-lwabiwo mali.
Ukubukeka - Xa kuthelekiswa nezinye iiragi ezisekwe kwinylon, ipolypropylene iyonwabisa ngakumbi.
Ngaba unokulahleka ngokulula inkcazo yayo -Xa zibekwe kwiindawo ezinxibe nzima zinokuhla kwaye imicu inokuqhekeka kwaye ayizukubuyela umva kwifom yoqobo.
Ubume bokurhabaxa - Isiphelo esisezantsi ukuya kumgangatho ophakathi wee-polypropylene rugs zinokuza noboya oburhabaxa xa kuthelekiswa nombhoxo woboya.
Uyabuva ubushushu kunye nokuxabana -Nangona inokumelana neemeko zemozulu ezibi, umgangatho ophantsi ukuya kumgangatho ophakathi iiragi ze-olefin zinokonakala ngokulula ngaphandle kokuba zanyangwa ngemichiza.
Inika imimoya eyingozi Kuba i-polypropylene yenziwa ngeekhemikhali zeplastiki inokukhupha ii-VOCs emoyeni. Qiniseka ukuba unegumbi elinomoya ofanelekileyo xa ufaka okanye kungcono ukuhlala ngaphandle ngaphandle iiyure ezimbalwa ngaphambi kokubeka ngaphakathi.
Ukuqina kwePolypropylene vs Wool Rug
Iikhaphethi zoboya zinokugqithisa iikhaphethi zentsinga eyenziweyo ngenxa yeempawu zazo ezomeleleyo. Iintsinga zoboya zinobume bendalo obhijelweyo obunika ukomelela okwakhelweyo ngaphakathi kumonakalo, apho ikwanokuqina okubambekayo okwenza ifibre ibuye umva.
Oku kuthintela ifayibha yoboya ekubeni ingadibani naxa utsala ifanitshala kumphezulu wayo. Ngelixa i-polypropylene kunye nezinye iintsinga zokwenza izinto zenziwe ngendlela engeyiyo oko kuthetha ukuba amandla abo anokuphela ngokuhamba kwexesha.
Ukucocwa kwePolypropylene vs Wool
Ngokubanzi, iiragi ze-olefin kulula ukuzicoca kunoboya njengoko unokusebenzisa iisepha ezinamandla kumphezulu wazo.
Ukongeza, iiragi zokwenziwa azonakalisi lula ngenxa yeentsinga zelastiki apho ukuchitheka okunje ngeoyile akunakubambelela kakuhle.
Ngokweerawuli zoboya, kwelinye icala, amabala asekwe kwioyile kunokuba nzima kakhulu ukuwacoca, kwaye kuya kufuneka ulumke ekusebenziseni iisepha kwiboya njengoko iikhemikhali zinokonakalisa iintsinga zendalo.
Ukuhlamba oomatshini kunokunciphisa umbhoxo wakho woboya, ke qiniseka ukuba ujonga izindululo zokucoca umenzi wakho.
Ipolypropylene vs Ukhuseleko lweRug Wool
Kuba iiragi ze-olefin azifunxi amanzi, amabala asula ngokulula ukuthintela umphezulu omtyibilizi. Iibhola zoboya, okwangoku, ayisiyonto ityibilikayo.
Nangona kunjalo, i-flatweaves ezinje nge-dhurries kunye ne-kilim zinokuba yingozi ekunciphiseni, ngakumbi xa ingenankxaso inqabileyo yokugcina ilaphu likhona. Qiniseka ukuba une-padding erhabaxa phakathi komgangatho wakho kunye ne-rug yakho yoboya ukunqanda iingozi.
Xa kuziwa kwiingozi zomlilo, iiragi zoboya lukhetho olukhulu njengoko iigarethi eziyelelweyo okanye nawuphina umthombo wentlantsi ungasasazeki endaweni yoko uzicime.
Kuthatha isixa esikhulu seoksijini kunye nobushushu ukutshisa uboya, ngenxa yenitrogen kunye nomxholo wamanzi. Kwi-polypropylene, iya kunyibilika ngokulula kwaye itshise, ke thintela ukusebenzisa iiragi ze-olefin kufutshane nemililo evulekileyo. Jonga lo mbala woboya omnyama nomhlophe wexesha Amazon [ikhonkco elixhasiweyo]
Iindleko zePolypropylene vs Wool Rug
Iindleko zekhaphethi zoboya ziyahluka ngokwendawo evela kuyo uboya, nangona iiragi zoboya zihlala zibiza imali ephindaphindwe kabini kunenayiloni kunye Iiroli zepolyester .
Umzekelo i-5 'x 8' polypropylene rug kwivenkile eyaziwayo ye-intanethi ngoku iqhuba malunga ne-65 yeedola, ngelixa i-5 'x 8' yombhoxo ixabisa malunga ne-126 yeedola.
Iindleko zokuvelisa i-olefin ziphantsi kunezinye iindidi ezininzi zerugs, oko kuthetha ukuba ayibizi kakhulu kunezinye iiragi ezenziwe ngenayiloni okanye ipholiyesta. Nge-olefin, unokufumana ukonga kwangoko, kodwa kunjalo, ayizukuhlala ixesha elide njengeerug.
Ezinye izinto ezinokuchaphazela iindleko zeerugs zakho zibandakanya umgangatho, ubungakanani, kunye nokubandakanywa kwenkxaso okanye iphedi.
Amabala amakhulu endawo ngokubanzi, axabisa malunga ne- $ 400 ukuya kwi- $ 10,000, oko kuthetha ukuba ufumana uluhlu olubanzi lwamaxabiso kwaye iindleko ziya kuthi ekugqibeleni zixhomekeke kukhetho lwakho. Ngoncedo lokukhetha ityali jonga iphepha lethu malunga indlela yokukhetha ubungakanani bombhoxo .
Ngaba iirugs zewulu zingcono kunePolypropylene?
Iibhola zoboya ziphumelela ipolypropylene ikakhulu xa kufikwa ekuzinzeni nasekuphileni ixesha elide njengoko iirugin zerugin zanamhlanje zingasele zilinganisa ukuthamba kunye nomtsalane obonakalayo weerugs zoboya.
I-Olefin okanye i-polypropylene rugs zinomsonto osemgangathweni ngakumbi kwaye zinokukunika uyilo oluntsonkothileyo kodwa iiragi zoboya zisabonakala zikhangeleka zinobunkunkqele kwaye zinika imbonakalo yendalo yendalo.
Ukuba ujonga irabha ehlala ixesha elide ekhayeni lakho, iiragi zoboya lolona khetho unokukhetha, kodwa iiragi ze-olefin ziyasebenza kwabo bafuna ukonga kwangoko. Ke iyabila kwiimfuno zakho kunye nokuba uzimisele ukuchitha malini kwiiragi zakho.
Ucinga ntoni nge-polypropylene vs iiragi zoboya? Sazise amava akho kwizimvo. Ngolwazi oluthe kratya olunje ngolu jonga inqaku lethu malunga indlela yokubeka ityali phantsi kwebhedi .
umbono wesipho somtshato kumtshato wesibini
indlela yokufumana ilokhwe yomtshato
Iqela likaHarry potter elinomxholo we-bachelorette
Iilokhwe zemibala eziwayo ezinxitywayo emtshatweni
sesiphi isandla esingumnwe womsesane
nguwe endifuna iikowuti